महिनावारी भएको कति दिनमा से;क्स गर्दा ग,र्भ रहन्छ ? तरिका थाहा नभएर समस्यामा हुनुहुन्छ भने अवश्य पढ्नुहोस् यो वास्तविकता र लिनुहोस् भरपुर फाइदा – Gazabkonews
महिनावारी भएको कति दिनमा से;क्स गर्दा ग,र्भ रहन्छ ? तरिका थाहा नभएर समस्यामा हुनुहुन्छ भने अवश्य पढ्नुहोस् यो वास्तविकता र लिनुहोस् भरपुर फाइदा
काठमाडौँ- महिनावारी भएको कति दिनमा से; क्स गर्दा गर्भ रहन्छ ? वा कुन कुन सुरक्षित दिन हो ? भन्ने विषय एकीन गर्न गाह्रो छ । किन की महिलाको महिनावारी चक्र कति दिनको छ, यसले निर्धारण गर्छ ।
नियमित म,हिनावारी हुने र नहुनेमा यसले फरक अर्थ राख्छ ।सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भधारण हुन मुख्य रुपमा यौ;न स;म्पर्क, वी;र्य स्ख;लन, डिम्ब नि-षेचन र डि;म्ब-रोपण जस्ता कुरा हुनु आवश्यक छ ।
महिलाको डि;म्ब महिनाको एकपटक मात्र निष्कासन हुन्छ । डि;म्ब नि;ष्कासन हुने समय नजिक ग-र्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ । शु;क्र-की-टसँग मिलन हुन डि;म्ब निस्किएको हुनु आवश्यक छ ।
डि;म्ब निस्किएको यस्तै १४ दिनमा म-हिनावारी सुरु हुन्छ । यस्तै २८ दिनको म-हिनावारी भएको महिलाको १४औं दिनतिर डि;म्ब निस्कने भएकाले त्यतिबेला यौ;न स;म्पर्क गर्दा गर्भ रहने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ ।
डिम्ब निस्किएको यस्तै २४ देखि ४८ घण्टासम्म बाँच्छ भने महिलाको प्रजनन अङ्गभित्र शुक्रकीटहरू ७२ घण्टा वा त्योभन्दा बढी बाँच्न सक्छ, त्यसैले डि;म्ब निस्कने केही अघिको र केही दिनपछिको समयलाई ग,र्भधारणका दृष्टिकोणले अ,सुरक्षित का,ल मानिन्छ ।
कपाल काटेपछि उनलाई शरीरको आधा बोझ हल्का भएजस्तो भएछ। खुला आकाशमा उडेको पन्छीझैं स्वतन्त्र महशुस गरिन्, ‘कपाल नभएपछि एक किसिमको आत्मबल पाएँ। मानौं पहिले मेरा ती आत्मबल कपालभित्र लुट्पुटिएका थिए।’
‘हरेक पटक फोन गर्दा कपाल कति लामो भयो भनेर सोध्नुहुन्छ। अहिलेसम्म छोटो कपालमा देख्नु नभएकाले एक्कासि खौरिँदा उहाँलाई ठूलै धक्का पर्‍यो,’ उनले भनिन्।
छोरी यहाँ जति आफ्नो ख्याल गरेर बसे पनि उता आमालाई ‘के खाई होला, कसरी बसेकी होला’ भनेर पेट पोलिहाल्छ।
‘पहिले कामको व्यस्तता बुझेर कहिलेकाहीँ मात्र फोन गर्नु हुन्थ्यो। अब यो समयमा छोरी एक्लै हुँदा नगर्ने कुरा आउँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसमाथि भक्तपुर क्षेत्रतिर कोरोना संक्रमण फैलिएको खबर सुनेर आत्तिनुभएको छ। समाचार सुनेको दिनदेखि दिनमा एकचोटि फोन गर्नु हुन्छ।’
‘फेरि काममा फर्किन आतुर भइरहेकी छु। कलाकार भएर एकै ठाउँमा बसिरहन गाह्रो हुँदो रहेछ। फेरि आफूले मनबाट चाहेर गरेको काम एकाएक रोकिँदा नराम्रो लाग्ने,’ लकडाउन अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्।
‘भान्सामा छिरेपछि त्यहीँको काममा अल्झिरहन्छु। एक्लै भएकाले कसैका लागि बनाएर छिटोछिटो खाऊँ भन्ने पनि छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘विस्तारै खाना पकाउँदा, खाँदा अनि सबै धन्दा सकाउँदा त दिउँसो भइसक्छ। अनि आधा दिन त्यसै जान्छ।’
‘मलाई इतिहासका कुरा पढ्न रूचि छ। काम भ्याएर समय मिलेका बेला तिनका किताब पढेर बस्छु,’ उनले भनिन्, ‘कोठाभित्र एकोहोरो थुनिएर बस्न मलाई गाह्रो हुन्छ। धन्न म बस्ने ठाउँ अलि रमाइलो छ। थोरै घर भएकाले अधिकांश ठाउँ धानबारी र खेतले भरिएका छन्। कहिलेकाहीँ कोठा बाहिर निस्किँदा मन र दिमाग शान्त हुन्छ।’
लकडाउनभर हेरेको फिल्ममध्ये ‘द लन्च बक्स’ मा बलिउड नायक इरफान खानको अभिनय छ। यो फिल्मले राम्रो चर्चा पाएको थियो तर समय नमिलेका कारण सुरक्षाले हेर्न पाएकी थिइनन्।